मेवा खानाले चिसो लाग्ने, खोकी लाग्ने हुँदैन...यस्तै अन्य फाइदाहरू
एजेन्सी । मेवामा प्रचुर मात्रामा भिटामिन, पोटासियम र क्याल्सियम पाइने गर्दछ । यो सहजै पचाउन सकिने फल हो । त्यसैले यो त्यस्ता व्यक्तिले पनि खान सक्छन्, जसको पाचन शक्ति कमजोर रहेको छ ।
३० वर्षपछि ब्लड क्यान्सर हुने संभावना बढी !
एजेन्सी । ब्लड क्यान्सर एउटा प्राण घातक रोग हो । यसको समयमा नै उपचार हुन सकेन भने मानिसको ज्यानै जान सक्छ । यो क्यान्सर कुनै पनि उमेरका मानिसहरुलाई हुन सक्छ । तर ३० वर्षपछि ब्लड क्यान्सर हुने संभावना बढी रहने गर्दछ ।
यस्तो रहेको छ आजको तपाईको भाग्य– असोज ९ गते
वि.सं.२०७६ साल असोज ०९ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०१९ सेप्टेम्बर २६ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४१ । आश्विन कृष्णपक्ष । तिथि द्वादशी, ०४ घडी ०८ पला, बिहान ०७ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त त्रयोदशी । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ५३ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५४ मिनेट ।
गुणकारी ग्रीन–टी : त्वचामा चमक ल्याउनुका साथै वजन समेत कम गर्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्यका लागि ग्रीन–टी निकै लाभदायी मानिन्छ । परिवर्तन भएको समयसँगै पछिल्लो वर्षहरुमा ग्रीन–टी लोकप्रिय बनिसकेको छ ।
तपाई बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ ? धेरैजसो मानिसहरु बिहानको समयमा मस्त निदाउँछन् । बिहानको निद्रा सबैलाई प्यारो हुन्छ । हालै एक अध्ययनले बिहान छिटो उठ्ने महिलामा अन्य महिलाको तुलनामा स्तन क्यान्सरको खतरा कम हुने देखाएको छ ।
ग्याष्ट्रिकको अचुक औषधि डल्ले खुर्सानी
मानिसको आनीबानी थाहा पाउने केही उपायहरु
एजेन्सी । कुनै पनि स्वार्थी मानिससँग जीवन काट्न एकदमै गाह्रो काम हो । जो मान्छे आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ र अरुको वास्था नै गर्दैन त्यस्ता मानिसहरुका कारण जीवनमा धेरै समस्याहरु आइपर्ने गर्छन् ।
हरेक श्रीमानले बुझ्नै पर्ने श्रीमतीका यी विशेष कुराहरु
एजेन्सी । हरेक परिवारमा आत्मियता हुनु आवश्यक छ । पति पत्नीबीच हुने आपसी समझदारीले परिवारमा ठुलो अहम भुमिका खेल्ने गर्छ ।
जब गोपिनीहरु रनभुल्लमा परे...
एजेन्सी । भगवान श्रीकृष्णले बाल्यकालमा अन्य गोप बालकहरूसँग मिलेर गोपीनीहरूका घरमा गएर मखन (नौनी) चोरेर खान्थे।